GUULO VS QARASH: Lixda kooxood ee ugu waa weyn Premier League-ga oo aan qiimeynay guulihii ay gaareen iyo dhaqaalihii ka baxay…… – Gool FM
GUULO VS QARASH: Lixda kooxood ee ugu waa weyn Premier League-ga oo aan qiimeynay guulihii ay gaareen iyo dhaqaalihii ka baxay……
(London) 03 Jan 2017. Manchester City qarash badan ayey suuqa galisay xagaagii hore, natiijada waa mid muuqata hadda –lixda kale ee ugu waa weyn horyaalka wey la tacaali la’yihiin ciidamda Pep Guardiola.
Manchester United waxa ay haysaa tababare iyo ciyaaryahan ka socon la’a dhawaqa dariskooda.
Chelsea, Liverpool, and Spurs iyagu dib ayey ka heleen bandhig ciyaareedkoodii wanaagsanaa balse wali Arsenal waxa ay ku maqan tahay damaashaadkii Chrismass-ka.
Waxaan warbixintan xoogga ku saari doonnaa lixda kooxood ee ugu waa weyn Premier League-ga qarashkii ay galeen tan iyo 1992 waxaana bar bar dhigi doonnaa guulaha ay soo hooyeen.
Spurs: £815 million – Waxba ma qaadin
Tottenham Hotspur waxa ay xilli ciyaareedkeedii ugu fiicnaa dheeshay kal hore oo ay kaalinta labaad ku dhammeysatay xilli ay horyaalka hanatay Chelsea – sanadkan nasiib ayey leedahay haddii ay afarta sare gasho – Spurs tan iyo 1992 waxa ay suuqa galisay £815 million balse ma aysan qaadin horyaal.
Liverpool: £1.072 billion – Waxba ma qaadin
Taageereyaasha Liverpool wey la yaaban yihiin sababta kooxdoodu horyaalka ugu qaadi la’dahay tan iyo 1990 – waxa ay qarash gareeyeen £1.072 billio. Markii ugu dhawaa waxa ay ahayd 2014 oo ay Manchester City ka qaaday.
Manchester City- £1,427 billion – 2 horyaal
Manchester City sida Chelsea ayey ahayd koox dhexe, balse waxaa iibsaday bilyanneerka carbeed ee Shiekh Mansoor kaddib guulaa xigay. Waxa uu galiyey Dollar-kii Petrol-ka – lacagta ay City suuqa galisay wixii ka dambeeyey 1992 waa £1,427 billion waxa ayna qaaday 2 horyaal.
Arsenal: £639mil – 3 horyaal
Arsenal saddex jeer ayey ku guuleysteen horyaalka tan iyo markii loo bixiyey Premier League-ga –kii ugu dambeeyey iyaga oo aan dhinacooda dhulka la dhigin ayey 2004 ruxee. Wenger waxa ay suuqa galiyeen ilaa iyo 1992 aduun dhan £639 million.
Chelsea: £1.439 billion – 5 horyaal
Wixii ka horreyey 2004, Chelsea waxa ay ahayd kooxaha dhexe ee England, balse wax walba waxaa bedelay Roman Abramovich, bilyanneerka Russia oo iibsaday. Waxa ay suuqa galiyeen £1.439 billion wixii ka dambeeyey 1992 waxa ayna qaadeen shan horyaal.
Manchester United: £1.157 billion -13 horyaal
Markii ugu dambeeysay ee ay Manchester United qaadeen horyaalka waxa ay ahayd 2013 – waxa ay ku macsalaameeyeen halyeygoodii tababaraha u ahaa 26ka sano iyo barka Sir Alex Ferguson. United waxa ay suuqa galisay £1.157billion waxa ayna qaaday 13 Premier League.